ကြေးမုံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂရိဒဏ္ဍာရီလာ 'Judgement of Paris' ဇာတ်လမ်းရေးဆွဲထားသော အစ်ထရစကန်ခေတ် ကြေးမုံ၊ ၄၀၀-၃၀၀ ဘီစီ
ကြေးမုံ (အင်္ဂလိပ်: Bronze mirror) သည် ဖန်ဖြင့်ပြုလုပ်သော မှန်များထက် ရှေးပိုကျကာ အစ်ထရူးရီးယာ အီတလီမှသည် တရုတ်နိုင်ငံအထိ အမျိုးမျိုးသော ယဉ်ကျေးမှုများစွာ၏ အထက်တန်းလွှာ အသုံးအဆောင်များများကြား ဤကြည့်မှန်မျိုးကို ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များက တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ကြေးညို (bronze) ဖြင့် ပြုလုပ်ကြပြီး ရံခါတွင် ကြေးနီကြေးမုံ (copper mirror) ဟူ၍ မှားယွင်းစွာ သုံးနှုန်းကြသည်။
၁.၂ အိန္ဒုတောင်ကြား ယဉ်ကျေးမှု
၁.၃ တမီလ် ဗိုင်းဂိုင် ယဉ်ကျေးမှု
၃ အခြား ဖတ်ရှုရန်
အရှေ့ဟန်ခေတ်မှ ကြေးမုံတစ်မျိုး (TLV ကြေးမုံ)
ပြောင်လက်အောင်တိုက်ထားသော ကြေးမုံများကို ရှေးခေတ်အီဂျစ်သားတို့က ဘီစီ ၂,၉၀၀ မှစ၍ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အိန္ဒုတောင်ကြား တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော လူမှုယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အစည်းတွင် ကြေးမုံများ၏ သက်တမ်းသည် ဘီစီ ၂၈၀၀ နှင့် ၂၅၀၀ ကြား ရှိလေသည်။ များသောအားဖြင့် ပုံသဏ္ဌာန်မှာ အဝိုင်းဖြစ်၏။
တမီလ် ဗိုင်းဂိုင် ယဉ်ကျေးမှု[ပြင်ဆင်ရန်]
အိန္ဒယနိုင်ငံ တမီလ်နာဒူပြည်နယ်ရှိ အဒိချန်နာလာ နှင့် ကီးလာဒီ နယ်မြေများတွင် တူးဖော်မှုများနှင့်အတူ ဗိုင်းဂိုင်မြစ် တောင်ကြားဒေသတွင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနေထိုင်ခဲ့သည်ဟု အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ရှေးဟောင်းသုတေသနအဖွဲ့လေ့လာရေးအသင်း၏ ထိုစဉ်က ကြီးကြပ်သူ အလက်ဇန္ဒား ရီးယာသည် ၁၈၉၉ တွင် အဒိချန်နာလာတွင် တူးဖော်မှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကြေးညိုအဝိုင်းချပ် နှစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ရာ အခြားလူမှုယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့အစည်းများ၌တွေ့ရသော ကြေးမုံများနှင့် ဆင်တူသည်။ ကာဗွန်အခြေပြု သက်တမ်းတွက်နည်းဖြင့် စစ်ဆေးကြည့်ရတွင် ယင်းပစ္စည်းများသည် ဘီစီ ၁၅၀၀ မတိုင်မီက ပစ္စည်းများဟု ရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။.
အင်္ဂလန်ရှိ St Keverne အရပ်တွင် ဘီစီ ၁၂၀-၈၀ ကြား၌ တွေ့ရသော သံခေတ်မှ ကြေးမုံ
ကျောက်ခေတ်နှောင်းပိုင်းမှစ၍ တရုတ်ပြည်သို့ အနောက်ဘက်မှ မှန်များ ရောက်ရှိလာသည့်အချိန် ချင်းမင်းဆက် ကာလအထိ ကြေးမုံများကို တရုတ်တွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြ၏။ ကြေးမုံများသည် အဝိုင်းပုံစံဖြစ်ကာ တစ်ဖက်ကို အလင်းပြန်စေရန် ပြောင်လက်အောင် ပွတ်တိုက်ထားကာ ကျောဘက်မျက်နှာပြင်၌ ပုံများပါဝင်၏။ အလယ်တွင် ဖုတစ်ခုပါပြီး အဝတ်အစားများကို ချိတ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ အစောဆုံး တရုတ်ကြေးမုံ နမူနာပစ္စည်းအချို့သည် ကျောက်ခေတ်နှောင်းကာလက ချီးကျား ယဉ်ကျေးမှု (Qijia culture) ကာလမှဖြစ်၍ ဘီစီ (၂,၀၀၀) ခန့် သက်တမ်းရှိသည်။ သို့သော်လည်း စစ်ပြိုင်ခေတ် ကာလများမတိုင်မချင်း ကြေးမုံများကို များများစားစယးမတွေ့ရဘဲ အခုနှစ်ဆယ်ခန့်သာ ရှာတွေ့ခဲ့ကြသည်။ စစ်ပြိုင်ခေတ်တွင် ကြေးမုံများ ခေတ်စားလာ၍ ဟန်မင်းဆက်တွင် ကြေးမုံတစ်မျိုးကို စတင်တီထွင်မိတ်ဆက်ခဲ့နိုင်၍ TLV mirror ဟူ၍ ယခုခေတ်တွင် ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ယသ်းကြေးမုံများကို ထိုခေတ်တွင် အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဟန်ခေတ်နှင့် ထန်ခေတ်တို့ရှိ ကြေးမုံများသည် နည်းပညာပိုင်းအရ ရှေ့တန်းတွင်ရှိသည်ဟု ယူဆကြ၏။ စုန့်မင်းဆက်ကာလအထိ ကြေးမုံများသည် ခေတ်စားခဲ့သည်။ သို့သော် မင်မင်းဆင်နှင့် ချင်းမင်းဆက်ကာလများတွင် အနောက်တိုင်းမှန်များရောက်ရှိလာခဲ့ကြသဖြင့် ကြေးမုံများအား လူကြိုက်များမှု တစတစ ယုတ်လျော့လာခဲ့ကြသည်။
ဥရောပဒေသများတွင် ကြေးခေတ်၊ သံခေတ်မှ ကြေးမုံများကို နေရာအများအပြားတွင် တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အင်္ဂလန်ရှိ ဘာ့ဒ်လစ်ပ်ရွာနှင့် လန်းတန် ဟဲရင်းရွာ ကြေးမုံများမှာ ထင်ရှားသော နမူနာပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ အစ်ထရာစကန် (အီတလီ) ကြေးမုံများကို ဘီစီ ၆၀၀-၂၀၀ ကြားတွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြ၍ ဗြိတိန်ရှိ ခဲလ်တစ်ကြေးမုံများကို ရောမတို့နယ်မြေ သိမ်းပိုက်သည့်ကာလ မတိုင်မီအထိ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။
↑ Z. Y. Saad: The Excavations at Helwan. Art and Civilization in the First and Second Egyptian Dynasties, University of Oklahoma Press, Oklahoma 1969, p.54
↑ Alexander Rea: Catalogue of the Prehistoric Antiquities,1915, Item 15,23, Plate II
↑ B SASISEKARAN et al: ADICHANALLUR: A PREHISTORIC MINING SITE, Indian Journal of History of Science, 45.3 (2010) 369-394
↑ "The girl with the chariot medallion:awell-furnished, Late Iron Age Durotrigian burial from Langton Herring, Dorset" (2019). Archaeological Journal 176. doi:10.1080/00665983.2019.1573551.
↑ Lloyd-Morgan၊ Glenys (1977)။ 'Mirrors in Roman Britain', in J. Munby and M. Henig (eds), Roman Life and Art in Britain။ BAR။ pp. 231–52။
Wikimedia Commons တွင် Bronze mirrors နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြေးမုံ&oldid=622616" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။